လက်ကား Youhottest Ladies Velvet Pajamas ဆောင်း ဦး ရာသီဆောင်းရာသီအမျိုးသမီးသုံးခုံအောက်အကျီင်္အိတ်ဇာဂျင်းဘောင်းဘီထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | အချစ်ဆုံး
Youhottest Ladies Velvet Pajamas ဆောင်း ဦး ရာသီဆောင်းရာသီအမျိုးသမီးများ ...
Youhottest 2020 ကတ္တီပါ Nightgown ဖဲနင်းဖိနပ် ...
Youhottest အမျိုးသမီးသုံးအိပ်ယာအ ၀ တ်များ Silk Pajamas Satin Pajama ...
Ladies ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီတိုရေတို ...
2021 အသစ်စတိုင် retro နှင်းဆီပန်းအမျိုးသမီးဝတ်ခြင်း
2021 ကျားသစ်ပုံနှိပ်ဘောင်းဘီတိုအမျိုးသမီးသုံးလုံး ...
Youhottest Ladies Velvet Pajamas ဆောင်း ဦး ရာသီဆောင်းရာသီအမျိုးသမီးသုံးအဝတ်အထည်များလက်ကိုင်အိတ်ဇာဇာပါဂျမာသတ်မှတ်
ကျား - မ
ကော်လာ: အလှည့် -Down ကော်လာ
ရာသီ - ဆောင်း ဦး ရာသီ
အရွယ်အစား: M, L ကို, XL
စတိုင်: ဆောင်း ဦး ရာသီ sleepwear
style2: အမျိုးသမီးများအတွက် Lounge သုံးသည်
style4: လက်ရှည်ကတ္တီပါ sleepwear
item ကို: လက္ကားကတ္တီပါ sleepwear
ပေးပို့ချိန်: ငွေပေးချေမှုအတည်ပြုပြီးနောက်4ရက်
၁။ မတူညီသောမော်နီတာနှင့်အလင်းရောင်သက်ရောက်မှုများကြောင့်ပစ္စည်း၏အမှန်တကယ်အရောင်သည်ရုပ်ပုံပေါ်ရှိအရောင်နှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
၂။ လက်ဖြင့်တိုင်းတာခြင်းကြောင့် ၁-၃ စင်တီမီတာအကွာအဝေးကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။
၁။ အရေပြားနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးအဆင်ပြေသည်: အထည်သည်ပျော့ပျောင်း။ တောက်ပသော၊
၂။ ဆေးကြောနိုင်စွမ်း။ အထည်ခြုံ။ ဆေးကြောနိုင်သောပုံသဏ္forာန်နှင့်မကိုက်ညီပါ။
3. မှေးမှိန်ရလွယ်ကူခြင်း: အသစ်သောဆေးဆိုးခြင်းနည်းပညာ၊ ဆေးခြင်း၊
၁။ ကတ္တီပါထည်ကိုသုံးသောအခါပွတ်တိုက်မှုကိုလျှော့ချရန်ခဲယဉ်းပြီးမကြာခဏ ပြောင်းလဲ၍ မကြာခဏဆေးကြောရန်ကြိုးစားပါ။
3. ကတ္တီပါအထည်ကိုမီးပူတိုက်နေစဉ်ကာလပတ်လုံးအလတ်စားအပူချိန်တွင်မီးပူတိုက်သင့်ပြီးအဝတ်အစားကိုဆန့ ်၍ သဘာဝအရညှိနိုင်အောင်တွန်းပြီးဆွဲသည်ကိုလျှော့ချသင့်သည်။
၁။ ရွှေကတ္တီပါထည်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဇီ ၀ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်း၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဓာတ်မတည့်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်မလွယ်ကူပါ။ ၎င်းသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အလွန်သေးငယ်သောပွတ်တိုက်အားမြှောက်သည့်ကိန်းရှိသည်။
၂။ ရွှေရောင်ကတ္တီပါထည်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်ချောမွေ့ပြီးပျော့ပျောင်းသည်။ ချောမွေ့ခြင်းသည်ပိုးထည်ပြီးလျှင်ဒုတိယဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရေပြားသည်ရွှေကတ္တီပါထည်နှင့်ထိတွေ့မိလျှင်၎င်းသည်ပိုးနှင့်တွေ့သကဲ့သို့ချောမွေ့နူးညံ့သောခံစားချက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ထူးခြားသည့်ပျော့ပျောင်းသောအသွင်အပြင်ဖြင့်၎င်းသည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရေပြား၏လက်မတိုင်းကိုဂရုတစိုက်နှင့်ဘေးကင်းစွာဂရုစိုက်သည်။
၃။ ရွှေရောင်ကတ္တီပါထည်သည်ထူးခြားသောလက္ခဏာများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များစွာရှိပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောအရေးအကြောင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ မီးခိုးကာကွယ်ခြင်း၊ အစိုဓာတ်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ သန့်ရှင်းလွယ်ကူခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထူးခြားသည်မှာ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအထည်ဖြစ်ပြီးအဝတ်အစားများတွင်အသုံးပြုသောခေတ်သစ်လူတို့နှင့်အလွန်ရေပန်းစားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လက္ကားနှင့် OEM အသေးထုတ်လုပ်မှုကိုလက်ခံပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်
တယ်လီဖုန်း: 008618016708838 (တယ်လီဖုန်း, whatsapp)
ရှေ့သို့ Youhottest 2020 ကတ္တီပါ Nightgown Satin Nightwear Backless Sleepwear
နောက်တစ်ခု: Youhottest Ladies Velvet Pajamas ဆောင်း ဦး ရာသီဆောင်းရာသီအမျိုးသမီးသုံးလက်ကိုင်အကျီင်္များဇာပတ်ဂျီဇာသတ်မှတ်ချက်
Plus အားအရွယ်အစားကတ္တီပါ Pajamas
ကတ္တီပါပန်းဝတ်စုံက Short Set
Youhottest အမျိုးသမီးစီးလက်များမပါသောပိုးပန်းဂျီဆန် ...
Smmoloa ပန်းပွင့်ပုံချည် Speghetti ကြိုးသိုင်းကြိုး ...
2021 အသစ်ရေခဲပိုးညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီပွအမျိုးသမီးများ ...
Smmoloa အမျိုးသမီး ၀ တ်ပန်းပွင့်ဒီဇိုင်းလက်ရှည် ...
Youhottest ပိုးချည်ဂျုံထိုးအမျိုးသမီးများ Sexy ...